Home News Al Shabaab oo Weerar Dhaba Gal Ah Ku Dhaawacay Gudoomiye Dagmo
Al Shabaab oo Weerar Dhaba Gal Ah Ku Dhaawacay Gudoomiye Dagmo
Wararka ka imanaya Gobolka Gedo aya shegaya in kooxda shabaab iyo ciidanka Kenya ay ku dagaalamayn inta udhaxeysa deeganka Faax faaxdhuun iyo Garileey halkaasi oo weerar dhaba gal a logu qaaday kolonyo Cidanka Kenya aha oo halkaasi marayay.
Mid ka mid ah saraakisha ciidanka dowlada ee gobolka gedo aya sheegay dagaalka oo ahaa mid culus in ciidamada dowladda ay ugu gurmadeen ciidamadii Kenyatiga ahaa ee wadada loo galay, wuxuu kaloo sheegay ciidamada Kenya inuu khasaare ka soo gaaray dagaalkaasi.
Intii uu dagaalka socday waxaa dhaawac uu soo gaaray Gudoomiyaha deegaanka Faax faaxdhuun, waxa uu sarkalkan uu shegay in uu hoggaaminaayay ciidamada dowladda ee gurmadka u aaday goobta dagaalka.
Gaashaanle Dhexe Ibraahin Maxamuud oo ka waramay dhaawaca soo gaaray Gudoomiyaha Faax faaxdhuun, wuxuuna sheegay in xaaladiisa ay tahay mid wanaagsan oo dhaawaca yara fudud uu soo gaaray.
Al Shabaab ayaa wadada u gala kolonyada gaadiidka ciidamada Amisom ee ku safra wadooyinka Gobolka Gedo.